डाक्टरले जन्मने बित्तिकैको बच्चा मा, र्यो भन्दै परिवारले अस्पतालमा घेरा लगाए …. -
Home News डाक्टरले जन्मने बित्तिकैको बच्चा मा, र्यो भन्दै परिवारले अस्पतालमा घेरा लगाए ….
डाक्टरले जन्मने बित्तिकैको बच्चा मा, र्यो भन्दै परिवारले अस्पतालमा घेरा लगाए ….
संसारमा एउटी आमालाई आफ्नो बच्चा जन्मदिनु जस्तो खुशीको कुरा अरु के नै हुन सक्छ र ।९ महिना पेटमा हुर्काएर संसार देखाउने आमाको बयान हामीले जति गरेपनी सक्दैनौं ।
तर कहिलेकाहीँ जन्मदिदा बच्चा बाँच्दैन जसले आमालाई निकै पि, डा दिने गर्छ । यस्तै एउटा घ, टना भर्खरै घ,टेको छ ।संसारमा एउटी आमालाई आफ्नो बच्चा जन्मदिनु जस्तो खुशीको कुरा अरु के नै हुन सक्छ र ।
९ महिना पेटमा हुर्काएर संसार देखाउने आमाको बयान हामीले जति गरेपनी सक्दैनौं । तर कहिलेकाहीँ जन्मदिदा बच्चा बाँच्दैन जसले आमालाई निकै पि, डा दिने गर्छ ।यस्तै एउटा घ, टना भर्खरै घटेको छ । बच्चाको जन्म हुँदा निकै राम्रो भएको र कुनै असर बच्चालाई न आएको भनेर डाक्टरले भनेको कन्चनका आफन्तले बताए । तर एक्कसी बच्चाको धड्कन रोकिएको भन्ने खबर सुनेपछि उनीहरू भावविभोल भएका थिए ।
गण्डकी हस्पिटलमा एकजना नानीको जन्मने बित्तिकै मृ ,त्यु भएको छ । कन्चन गुरुङ नाम गरेकी एकजना महिलाले जन्मदिएको शिशु मृ, त फेला परेकी छिन् । कन्चनले बच्चालाई जन्मदिदा निकै गाह्रो भएको र शल्यक्रिया गरेर बच्चा बिकाल्न डाक्टरलाई अपिल गरेकी थिइन् तर डाक्टरले नर्मल नै हुने भनेर शल्यक्रिया गर्न मानेको थिएन ।
बच्चाको टाउकोमा र घाँ ,टीमा चो, ट समेत देखिएको हुँदा कन्चनका आफन्तहरु डाक्टर आफ्नो बच्चा मा, रेको भन्दै आएक छन् ।यसरी डाक्टर माथी आ ,रोप आइरहदा र एउटा बच्चाको ज्यान गुमेको हुँदा घ, टनाको उचित छानवीन हुन जरुरी देखिन्छ ।
बच्चाको जन्म हुँदा निकै राम्रो भएको र कुनै असर बच्चालाई न आएको भनेर डाक्टरले भनेको कन्चनका आफन्तले बताए ।तर एक्कसी बच्चाको धड्कन रोकिएको भन्ने खबर सुनेपछि उनीहरू भावविभोल भएका थिए ।
Previous articleभा,इरल झा,क्री को मृ,त्यु भयो के का,रण ले भयो हे,र्नुस् भखरै
Next articleसंसारलाई नै चकित पार्दै यी व्यक्तिले नाकबाट पानी पिएर आँखाबाट निकालेर मैन बत्ति निभाए , हेर्नुहोस्